Trenchless ubuchwepheshe ukwakhiwa ubunjiniyela imigqa esikhundleni indlela aphelelwe yisikhathi ukumba imisele. It kalula ozofakwa ezindaweni kuvinjelwe, ezifana edolobheni esakhelwe up ingqalasizinda elikhulu namkha ubambe piping ngaphansi umfula, ichibi, uma kunesidingo. ochwepheshe Modern bathole ukusetshenziswa kabanzi kule nqubo.
Indlela wokubhoboza HDD
Lubhoboze ovundlile ohlangothini imishini - yinqubo Trenchless ukufakwa zokuxhumana ezehlukene ngaphandle kokuphula komgandayo futhi landscape yemvelo. Kuphethwe wokubhoboza ndlela ivumela ukuba bayamba kuze kube amamitha 50 futhi isitaki ipayipi diameters kuze kufinyelele 400 mm.
Ngaphambi kokuqala ukwakhiwa ochwepheshe kudingeka sihlaziye khona komhlaba, ukutadisha izakhiwo kanye nokwakheka enhlabathini, kanye nezinye izinto Geophysical. Inqubo iqala ngamadijithi HDD wokubhoboza Drilling umgodi umshayeli, bese kuziwa oyifunayo ukunwetshwa ubukhulu. I-opharetha isitshalo uyakwazi ukuqapha intuthuko ikhanda sokuprakthiza, uwafake oyifunayo enyakazayo engela elikuvumela ukundlula Tinsita ekhona komhlaba nezinye izithiyo. Ngemva kokuphothulwa imishini Ochwepheshe yokwelula tubing singena emhubheni futhi silungise uhlelo futhi endaweni landscaped.
indlela okunengqondo laying of amapayipi
Sibé ubuchwepheshe ethandwa kakhulu Trenchless ipayipi kubekwa. Izindlela ngoba imishini ovundlile ihlaba futhi mikrotonnelirovanija abe eziningi eziwusizo. Ngokusetshenziswa imishini esebenza kahle kwandisa ijubane ukwakhiwa, kunciphise inani le- edingekayo, inani msebenzi wokulungiselela kanye nenani imibhalo saziso.
Trenchless kubekwa amapayipi izindlela zesimanje akudingi ukuqaliswa yokwemba imisebenzi futhi mahhala, akukhawuleli ukuhamba izimoto nabantu kume endaweni ukwakhiwa, ngeke kuyilimaze zokuhamba emigwaqweni, okuvumela kongiwa imali (kufika ku-50% iphrojekthi). Lapho Imisebenzi esetshenziswa ukufakwa wosayizi omncane evumela ukuthi pipework emigodini encane.
Ovundlile imishini yokumba
Izinhlobo ovundlile imishini ukufaka ziyehluka nemingcele eziningana: uhlobo, ubude engela imishini, umbono we chassis kanye injini esetshenziswa imishini udaka , nokunye.
Ovundlile imishini umshini - a ukusebenza okuphezulu futhi inqubo enamandla, kuyilapho kulula sasivumela ukuba isebenze. Imishini ivumela ukuba abeke amapayipi izinjongo ezihlukile - indle, amanzi, igesi, uwoyela, ukushisa amanethiwekhi kanye nezinhlobo ezahlukene izintambo (ugesi, ucingo, fiber-optic). Ngisho ezimweni zokusebenza nzima kwemishini ngokushesha ukubhekana kangcono nale imisebenzi.
Zonke imishini imingcele ezibucayi lingasethwa ngaphambi kokuqala umsebenzi. Ngesikhathi inqubo, opharetha ungalungisa idatha futhi ulawule ukwakhiwa kahle isimiso sokuthutha indle evumela ukuphendula izinselele abasafufusa.
Izici laying Pipelines
Futhi amanzi amanzi ohlelweni akhiwe usebenzisa amandla adonsela phansi noma ingcindezi amapayipi ezenziwe ngezinto ezahlukene. Ukuze umnotho futhi abheke ukuthi kungenzeka okuhleliwe ukuhlola noma ukulungisa inethiwekhi piping ongaphandle kumele ahlelwe expediently. Kuze kube yimanje, igemfe kufanele luhlanganise endleleni emfushane, ngenombolo ubuncane yokuwela kwezakhiwo yokufakelwa.
Amapayipi yangaphandle bavezwa ingcindezi enkulu, adle futhi ibhekane Ukushisa kanye nokupholisa. Ukuze ukufakwa umsebenzi enkampanini yokwakha usungaqala kuphela ngemva kokuthola zonke izimvume ezidingekayo. Ukufakwa izigaba ezinkulu ngamabhoksi nofana ngamabhlogo, okwenza le nqubo inhlangano, Welding, ukuzisika kanye olufanelekayo amapayipi kakhulu isikhathi esiningi. Ngakho-ke, kubekwa amapayipi inethiwekhi kuhlanganisa iqhaza ngezisebenzi eziyizingcweti nangezinto ukusetshenziswa amayunithi ezahlukene imishini ephambili.